လန်ဒန်မြို့က မြန်မာများ စစ်အာဏာသိမ်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
R2P မြန်မာ့အရေးမှာ နိုင်ငံတကာက၀င်ရောက်စွတ်ဖက်ဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ လန်ဒန်မြို့က ဆန္ဒပြပွဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီနဲ့တိုင်းရင်းသားလှုပ်ရှားသူတွေ စုစုပေါင်း နှစ်ရာလောက် ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်နေသူတဦးကို ကိုသားညွန့်ဦး ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး ။. ။ဒီနေ့ဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့။ ဘယ်နေရာမှာပြကြလည်း။
ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သူတဦး။.။ ဟုတ်ကဲ။ ဒီနေ့ မနက် ၁ဝနာရီလောက်မှာ CRPH (UK) ဂရု့က ပါလီမန်ထဲကို စာသွားပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ပါလီမန်ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျမတို့ UK မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုရင် Prime Minister Question ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင် ပါလီမန်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပါ။ အဓိက R2P ကို ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပါ။ US မှာလည်း UK မစ်ရှင်ရှိတဲ့အတွက် ဒီဟာကို ဆန္ဒပြရတာပါ။ အဲဒီနောက် ပါလီမန်ကနေပြီး တရုတ်သံရုံးကို ချီတက်နေပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး ။.။ တရုတ်သံရုံးမှာရော အဓိက ဘာတွေတောင်းဆိုကြမှာလဲ။
ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သူတဦး ။. ။ ရုတ်သံရုံးကိုစာပေးမယ်ရှင့်။ ကျမတို့ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း တရုတ်အသုဘတွေမှာ ဝတ်သလိုမျိုး ဝတ်စုံတွေဝတ်နေကြပါတယ်။ ပြီးသွားရင် တရုတ်သံရုံးကို တရုတ်လိုရေးထားတဲ့စာတွေပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး ။. ။ အဓိက တရုတ်သံရုံးကို ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လိုလားချက်တွေဘာတွေရှိလဲ။
ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သူတဦး။. ။ ခုလောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ ကျမတို့လိုလားတာ ဒီမိုကရေစီပဲပေါ့နော်။ အခုအနေအထားမှာ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ R2P အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး။.။ တောင်းဆိုနေကြတာတွေဖြစ်မြောက်လာဖို့ရော ဘယ်လောက်အထိမျှော်မှန်းထားလဲ။
ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သူတဦး။. ။ကျမတို့ကတော့ စတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁)ရက်နေ့ကတည်းက တိုင်ပင်တယ်။ အမြဲတန်းအောင်စိတ်ပဲမွေးတယ်။ ကျမတို့ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောသလို R2P ကိုလည်းမျှော်လင့်တယ်။ တကယ်လည်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့။ နိုင်ငံတကာက ကူညီမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ရှိတယ်ကျမတို့က နိုင်မှာ။ နိုင်စိတ်ပဲမွေးတယ်။
ကိုသားညွန့်ဦး ။။ အခုဆန္ဒပြတာ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းက လူအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ ။
ဆန္ဒပြပွဲပါဝင်သူတဦး။ အင်အား ၂ဝဝ ကျော်မယ်ထင်တယ်။ မြန်မာတင်မကပါဘူး။ ကချင်၊ကယား ၊ ချင်းလူမျိုးတွေ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ကရင် နဲ့ တရုတ်စပ်ပါတယ်။ တရုတ်တွေလည်းပါတယ်။ ဟိန္ဒိူတွေ၊ ရိုဟင်ဂျာတွေ လာပါတယ်ရှင့်။
ဒါကတော့ UK က မြန်မာ့အရေးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် ကုလသမဂ္ဂမှာတော့ မကြာခင်အချိန်မှာပဲ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ တခါးပိတ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အလှည့်ကျဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာ့အရေး အရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ယူဖို့ UK က အဆိုပြုထားပြီး၊ ဒီအစည်းအဝေးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေ ရှင်းပြဖို့ရှိနေပါတယ်။
R2P မွနျမာ့အရေးမှာ နိုငျငံတကာကဝငျရောကျစှတျဖကျဖို့ တောငျးဆိုတဲ့ လနျဒနျမွို့က ဆန်ဒပွပှဲမှာ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီနဲ့တိုငျးရငျးသားလှုပျရှားသူတှေ စုစုပေါငျး နှဈရာလောကျ ဒီကနေ့ နလေ့ညျပိုငျးက ခြီတကျဆန်ဒပွခဲ့ကွပါတယျ။ ဆန်ဒပွပှဲမှာ ပါဝငျနသေူတဦးကို ကိုသားညှနျ့ဦး ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
ကိုသားညှနျ့ဦး ။. ။ဒီနဆေ့န်ဒပွတဲ့အခွအေနလေေးပေါ့။ ဘယျနရောမှာပွကွလညျး။
ဆန်ဒပွပှဲပါဝငျသူတဦး။. ။ ဟုတျကဲ။ ဒီနေ့ မနကျ ၁ဝနာရီလောကျမှာ CRPH (UK) ဂရု့က ပါလီမနျထဲကို စာသှားပေးပါတယျ။ ပွီးတော့ ပါလီမနျရှမှေ့ာ ဆန်ဒပွကွပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ ကမြတို့ UK မှာ ဗုဒ်ဓဟူးနဆေို့ရငျ Prime Minister Question ရှိပါတယျ။ အဲဒီအတှကျကွောငျ့ ဝနျကွီးခြုပျ ဘောရဈဂြှနျဆငျ ပါလီမနျမှာဆှေးနှေးဖို့အတှကျပါ။ အဓိက R2P ကို ဆှေးနှေးဖို့အတှကျပါ။ US မှာလညျး UK မဈရှငျရှိတဲ့အတှကျ ဒီဟာကို ဆန်ဒပွရတာပါ။ အဲဒီနောကျ ပါလီမနျကနပွေီး တရုတျသံရုံးကို ခြီတကျနပေါတယျ။
ကိုသားညှနျ့ဦး ။. ။ တရုတျသံရုံးမှာရော အဓိက ဘာတှတေောငျးဆိုကွမှာလဲ။
ဆန်ဒပွပှဲပါဝငျသူတဦး ။. ။ ရုတျသံရုံးကိုစာပေးမယျရှငျ့။ ကမြတို့ ဆန်ဒပွသူတှကေလညျး တရုတျအသုဘတှမှော ဝတျသလိုမြိုး ဝတျစုံတှဝေတျနကွေပါတယျ။ ပွီးသှားရငျ တရုတျသံရုံးကို တရုတျလိုရေးထားတဲ့စာတှပေေးမယျလို့သိရပါတယျ။
ကိုသားညှနျ့ဦး ။. ။ အဓိက တရုတျသံရုံးကို ဆန်ဒပွတဲ့ကိစ်စက ရညျရှယျခကျြနဲ့ လိုလားခကျြတှဘောတှရှေိလဲ။
ဆန်ဒပွပှဲပါဝငျသူတဦး။. ။ ခုလောလောဆယျအခွအေနကေတော့ ကမြတို့လိုလားတာ ဒီမိုကရစေီပဲပေါ့နျော။ အခုအနအေထားမှာ ကမြတို့နိုငျငံမှာ R2P အရမျးလိုအပျပါတယျ။
ကိုသားညှနျ့ဦး။. ။ တောငျးဆိုနကွေတာတှဖွေဈမွောကျလာဖို့ရော ဘယျလောကျအထိမြှျောမှနျးထားလဲ။
ဆန်ဒပွပှဲပါဝငျသူတဦး။. ။ကမြတို့ကတော့ စတဲ့ ဖဖေျောဝါရီ (၁)ရကျနကေ့တညျးက တိုငျပငျတယျ။ အမွဲတနျးအောငျစိတျပဲမှေးတယျ။ ကမြတို့ခေါငျးဆောငျ ကိုမငျးကိုနိုငျ ပွောသလို R2P ကိုလညျးမြှျောလငျ့တယျ။ တကယျလညျးဖွဈပကျြနတေဲ့အနအေထားဆိုတော့။ နိုငျငံတကာက ကူညီမယျလို့ မြှျောလငျ့တယျ။ နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးကလညျး ရှိတယျကမြတို့က နိုငျမှာ။ နိုငျစိတျပဲမှေးတယျ။
ကိုသားညှနျ့ဦး ။ ။ အခုဆန်ဒပွတာ မွနျမာအသိုငျးအဝိုငျးက လူအငျအားဘယျလောကျရှိလဲ ။
ဆန်ဒပွပှဲပါဝငျသူတဦး။ အငျအား ၂ဝဝ ကြျောမယျထငျတယျ။ မွနျမာတငျမကပါဘူး။ ကခငျြ၊ကယား ၊ ခငျြးလူမြိုးတှေ၊ ဘာသာပေါငျးစုံ၊ ကမြကိုယျတိုငျလညျး ကရငျ နဲ့ တရုတျစပျပါတယျ။ တရုတျတှလေညျးပါတယျ။ ဟိန်ဒိူတှေ၊ ရိုဟငျဂြာတှေ လာပါတယျရှငျ့။
ဒါကတော့ UK က မွနျမာ့အရေးဆန်ဒပွပှဲဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစု နယူးယောကျ ကုလသမဂ်ဂမှာတော့ မကွာခငျအခြိနျမှာပဲ ကုလသမဂ်ဂလုံခွုံရေးကောငျစီ တခါးပိတျအစညျးအဝေးကငျြးပဖို့ရှိနပေါတယျ။ အမရေိကနျပွညျထောငျစုက အလှညျ့ကြဥက်ကဌအဖွဈ တာဝနျယူထားတဲ့ လုံခွုံရေးကောငျစီမှာ မွနျမာ့အရေး အရေးပျေါ အစညျးအဝေးချေါယူဖို့ UK က အဆိုပွုထားပွီး၊ ဒီအစညျးအဝေးအတှငျး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ကုလအထူးကိုယျစားလှယျက မွနျမာနိုငျငံအခွအေနတှေေ ရှငျးပွဖို့ရှိနပေါတယျ။